काभ्रेमा दिउँसै बत्ती बालेर पढाउनुपर्ने एक विद्यालय « Arthatantra.com : A Complete Economic News Portal From Nepal.
काभ्रेमा दिउँसै बत्ती बालेर पढाउनुपर्ने एक विद्यालय
काभ्रे । हेर्दा पुरानो शैलीमा बनाइएको एक शताब्दी पुरानो एक विद्यालयमा जोसुकै पर्यटक होस् या नेपाली सबैको ध्यान आकर्षित हुने गर्छ । विद्यालय पनौती क्षेत्रको पुरानो गल्लीभित्र पर्छ । जुन ठाउँबाट प्रसिद्ध मकर मेला हेर्न जाने स्थल ब्रह्मायणी क्षेत्र नजिकै छ । यहाँ पुग्ने हर कोही यस विद्यालयको नजिक पुगेपछि विद्यालयभित्र गएर हेर्न उत्सुक हुन्छ कि त्यहाँ कसरी विद्यार्थी पढाइएको होला ?
“विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार राम्रो नभएका कारण विद्यार्थीलाई अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहभागी गराउन निकै मुस्किल छ ।” ताम्राकारले भने । “विद्यालयको पुनःनिर्माणका लागि सरकारलाई आह्वान गरे पनि अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन ।”
विद्यालयको अवस्था दयनीय भए पनि ताम्राकारले विद्यार्थीको सहयोगका लागि हात फैलाउन कुनै पनि कसर छाडेका छैनन् । बाटोमा हिँड्ने पर्यटकदेखि दातृ निकाय सबैसँग उनले सहयोग मागेर विद्यार्थीका लागि खाजादेखि लत्ताकपडा र शैक्षिक सामग्रीसमेत निःशुल्करुपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । कतिपय आर्थिक अवस्था कमजोर हुने परिवारका विद्यार्थीलाई त उनले छात्रवृत्तिसमेत उपलब्ध गराउनुभएको छ । विद्यालयमा नेपाली माध्यमबाट मात्र पढाइ हुने हुँदा अंग्रेजी माध्यमबाट पढ्न चाहने विद्यार्थीलाई बोर्डिङ स्कुलमा समेत छात्रवृत्तिको माध्यमबाट पठाउने गर्दै आएका छन् ।
अन्य विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीमध्ये पाठशाला विद्यालयबाट आउने विद्यार्थी निकै अनुशासित हुने गरेको पनौती–३ मा रहेको सेन्टलम एल्बम एकेडेमीका प्रधानाध्यापक अग्नि सापकोटाले बताए । शैक्षिक गुणस्तरमा पनि पाठशाला विद्यालय कम नभएको एसएलसीको नतिजाले देखाउने गरेको छ । “अरु विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीभन्दा मेहनत गर्नमा पाठशाला विद्यालयका विद्यार्थी कम छैनन्”, सापकोटाले भने ।
पाठशाला विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर राम्रो भए पनि यहाँको भौतिक पूर्वाधार नै चुनौतीको विषयका रुपमा रहेको छ । विद्यालयमा राम्रो र पर्याप्त कक्षाकोठा नभएको कारण त्यहाँका विद्यार्थी निकै समस्यामा छन् । “कक्षा साँघुरो छ, पढ्न उज्यालोको निकै समस्या हुने गर्छ ।” कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रा कृतिका हुमागाईंले भन्नुभयो, “बत्ती गएका बेला पढ्न निकै समस्या हुन्छ ।” वर्षात्को समयमा झ्यालबाट पानी छिर्ने र जाडो महिनामा निकै चिसो हुने हुँदा तातो कपडाले समेत नधान्ने उनले बताए ।
कक्षा साँघुरो भएकै कारण कक्षामा बसेर पढ्न निकै समस्या हुने गरेको कक्षा ८ मा अध्ययनरत अर्का छात्र श्रीकृष्ण श्रेष्ठले बताए । “गर्मी महिनामा त कतिपय साथी गर्मी सहन नसकेर बेहोससमेत हुने गरेका छन्”, श्रेष्ठले भने ।
विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारकै कारण यहाँ पढाउने शिक्षक शिक्षिकासमेत निकै समस्यामा छन् । विद्यालयको कक्षाकोठा र ट्वाइलेटसँगै भएकाले दुर्गन्धका कारण पठनपाठनमा निकै समस्या हुने गरेको विद्यालयकी शिक्षिका शान्ति ताम्राकारले बताइन् ।
यस्तोखाले अन्योलका कारण नै विद्यालयमा सुविधा भएर पनि विद्यार्थीे त्यसबाट वञ्चित छन् । सरकारले समयमा नै विद्यालयका लागि विकल्प दिए दिउँसै बत्ती बालेर पढाउनुपर्ने समस्याबाट विद्यालय माथि उठ्ने थियो ।मीना घोरसाइने/रासस